China Fmụaka FFP2 Mask Manufacture and Factory | Lanhine
Fmụaka FFP2 Mask
Nkebi Nke 15801
Ọdịdị / Ọrụ Akara na-enweghị valve / hyperfiltration
Ọkọlọtọ GB2626-2006 KN95 / EN149-2001 A1-2009
Ihe onwunwe Non-kpara Fabric, gbazee-fụọ Fabric, Ogbo warara, na-agbanwe Bands nko
Nkwakọ ngwaahịa 20pcs / igbe, 40box / katọn
Mkpokọta nha 8.0KGS
Ngwa Nlekọta ụlọ, ụlọ ọgwụ, ụlọ ọgwụ, n'èzí
* GB2626-2006 KN95 / EN149-2001 A1-2009 kwadoro na na ndepụta ọcha, ma ọ dịkarịa ala 95% filtration arụmọrụ megide aerosols enweghị mmanụ
* Ne akpụkpọ-enyi na enyi adụ na-abụghị kpara akwa, ala uche na-enweghị mkpali * Nonirritating na Mmetọ free
* Mfe iji & mmezi free
* Kemeghi aluminum imi clip na-enye mma kwesịrị ekwesị
* High nyo ihe onwunwe na 95% arụmọrụ
* Anaghị ahụ anya / n'ime imi clip
* Kemeghi earloop imewe adabara dị iche iche ndị mmadụ
FedEx / DHL / gbasie / TNT maka n'omume, Door-to-Door
Site Ikuku ma ọ bụ site n'oké osimiri maka ogbe ngwongwo, EXW / FOB / CIF / DDP dị
Ndị ahịa na-akọwapụta ndị na-ebugharị ibu ma ọ bụ ụzọ mbugharị azụmahịa
Oge Mbuga ozi: 1-2 ụbọchị maka ihe atụ; -14bọchị 7-14 maka ngwongwo ogbe.
* 7 * 24 online EMAIL / Trade Manager / WeChat / WhatsApp ọrụ!
* Anyị bụ ndị a factory n'iche disposable ájá masks, kacha mma mmepụta mgbanwe, kacha mma mma akara, kacha mma Service
* 100% QC nyocha Tupu Mbupu.
* NIOSH / CE / Benchmark depụtara ihe nkpuchi uzuzu, ọnụahịa asọmpi.
* Kwa ụbọchị karịrị 2 nde iberibe maka NIOSH N95 nkpuchi na 10 nde iberibe maka disposable ihu nkpuchi.
* Na ndepụta ọcha nke China na-abụghị ọgwụ na ahụike na mbupụ / USA FDA EUA / CE.
Q: Kedu mgbe m ga-enweta ọnụahịa ahụ?
A: Anyị na-aguputa n'ime 24 awa mgbe anyị nwetara gị ase.
Q: Ọ bụrụ na m chọrọ ịtụ obere ngwongwo, ị nwere ike ime ya?
A: Ọ bụrụ na ngwaahịa ị chọrọ anyị nwere ngwaahịa dị, nke ahụ ga-adị mma, ị nwere ike ịhọrọ ngwaahịa ngwaahịa. Ma ọ bụrụ na ọ bụghị, echegbula, anyị nwere ike iji iwu ndị ahịa anyị ndị ọzọ mepụta ọnụ. Mana ọ kwesịrị ichere oge.
Q: Enwere m ike ịnweta ihe nlele sitere na ụlọ ọrụ gị? Ekwesịrị m ịkwụ ụgwọ ụgwọ awara awara?
A: Ọ bụrụ na ịnwere ike ịnabata ihe nlele anyị dị, anyị nwere ike ịnye gị nnwere onwe n'efu. Ọ bụrụ n ’ịchọrọ ụdị ahaziri iche, anyị nwere ike ịghachite ọnụ ahịa gbasara ego awara awara, biko nye nnabata nnabata ibu ma kwụọ ụgwọ maka ọnụego kwupụtara n’akụkụ gị mgbe ị kwadosịrị iwu gị, a ga-ewepụ ego a ga-akwụ ụgwọ maka ibu gị. .
Q: Kedu ka ị ga-esi gbaso usoro m?
A: Mgbe ngwaahịa malitere imepụta, anyị ga-ese foto maka ngwongwo ahụ ma zitere gị ya. Maka ịchọta ụkọ mmepụta ọ bụla, biko kpọtụrụ anyị ka anyị mezie ya. Anyị ga-akpọtụrụ gị na mmepụta niile site na e-mail ma ọ bụ ozi ngwa ngwa, dị ka skype / whatsapp, ị nwere ike ịnweta akụkọ kachasị ọhụrụ gbasara iwu gị. Mgbe ngwongwo ndị ahụ gwụchara, anyị ga-ewere foto maka ngwongwo ahụ ma kpọkọta gị tupu ịbuga.
Nke gara aga: FFP2 nkpuchi na-enweghị Valve-buru ibu
Osote: KN95 Respirator nkpuchi
Nkpuchi Hygiene Childrenmụaka
Maskmụaka 3ply Disposable Mask (yi)
Childrenmụaka 3ply Disposable Mask (Obibi)